Isiteyitimenti esivela kuTim Cook sivuza abasebenzi apho athe wagxeka khona | Ndisuka mac
Isiteyitimenti esivela kuTim Cook sivuza abasebenzi apho ahlasela khona ukuvuza
UIgnacio Sala | 23/09/2021 16:00 | Izaziso, Iimveliso ze-Apple
NgoLwesibini, nge-21 kaSeptemba, uTim Cook wathumela i-imeyile kubo bonke abasebenzi malunga nentlanganiso yakhe nabasebenzi kwiveki ephelileyo, intlanganiso leyo yabhengezwa kumaphephandaba kwiveki ephelileyo.
Kule ntlanganiso, uTim Cook wathi Abayi kufuna ukuba abasebenzi babo bagonywe ukubuyela emsebenzini wabo kodwa ukuba baya kufuna Ukuvavanywa rhoqo kwe-COVID-19 phakathi kwabasebenzi abangafumananga.
Kule imeyile, uTim Cook uthetha ngokuvuza kwale ntlanganiso, egxininisa ukuba inkampani yenza "konke okusemandleni" ukuchonga abo bayikhuphileyo, esithi abantu abavuza ulwazi oluyimfihlo, abangabo be-Apple kwaye uchaze ukuba kunjani ndikhathazekile ngokuvuza.
Le ngxelo intsha ayithumele kubasebenzi ikwabhengeziwe nakumajelo eendaba. Kuyabetha ngamandla ukuba imemorandam egxeka ukuvuza kwenkampani nayo ikhutshiwe, kuba akukho nto bayenzayo ngaphandle koku. qinisekisa ukuba iindlela zokumelana neApple azisebenzi.
Nayi ingxelo epheleleyo eguqulelwe kwiSpanish.
Bekumnandi ukunxibelelana nawe kwintlanganiso yabasebenzi behlabathi ngolwe-Sihlanu. Kwakukuninzi okunokubhiyozelwa, ukusuka kwimveliso yethu entsha emangalisayo ukuya kwimisebenzi yethu eqhutywa ngamaxabiso ngokutshintsha kwemozulu, ucalucalulo ngokobuhlanga kunye nemfihlo. Kwakulithuba elihle lokujonga impumelelo yethu kwaye sixoxe ngezinto ezikuxhalabisayo.
Ndinibhalela namhlanje kuba ndivile ukuba uninzi lwenu belukhathazekile ngendlela engathethekiyo kukubona umxholo wale ntlanganiso uvuza iintatheli. Oku kuza emva kokuphehlelelwa kwemveliso apho uninzi lweenkcukacha zezipapasho zethu zazityhilwe nakumajelo eendaba.
Ndifuna wazi ukuba ndiyabelana nawe ngokukhathazeka kwakho. La mathuba okunxibelelana njengeqela abaluleke ngokwenene. Kodwa basebenza kuphela ukuba sinokuqiniseka ukuba umxholo uza kuhlala ngaphakathi kwe-Apple. Ndifuna ukukuqinisekisa ukuba senza konke okusemandleni ethu ukufumanisa ukuba ngubani ovuzayo.
Njengoko usazi, asikunyamezeli ukuxelwa kolwazi oluyimfihlo, nokuba yeyomntu oyimveliso yengqondo okanye iinkcukacha zentlanganiso eyimfihlo. Siyazi ukuba avuza inani elincinci labantu. Siyazi kwakhona ukuba abantu abavuza ulwazi olubuthathaka akufuneki babelapha.
Ndijonge phambili, ndifuna ukukubulela ngayo yonke into oyenzileyo ukwenza iimveliso zethu zibe yinyani kunye nayo yonke into oza kuyenza ukuzifumana ezandleni zabathengi. Sisungule i-iOS 15, i-iPadOS 15, kunye ne-watchOS 8 izolo, kwaye ngolwesiHlanu lixesha lokuba sabelane ngezinye zeempawu zethu ezimangalisayo kunye nehlabathi. Akukho nto ingcono kunaleyo. Siza kuqhubeka nokulinganisa igalelo lethu kubomi esibutshintshayo, unxibelelwano esilukhuthazayo, kunye nomsebenzi esiwenzayo ukushiya umhlaba uyindawo engcono.
Ngaba iApple iya kuba nakho ukunqanda ukuvuza kwixesha elizayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Isiteyitimenti esivela kuTim Cook sivuza abasebenzi apho ahlasela khona ukuvuza
Akuyi kubakho Fortnite ye-Mac ixesha elide
I-trailer esemthethweni ye-sci-fi miniseries Invasion ngoku iyafumaneka